Qaramada Midoobay ayaa sheegtay in tilaabooyinka loo qaaday dhanka bogsashada qaran ee Koonfurta Suudaan aysan ku filneyn - Amjambo Africa
Qaramada Midoobay ayaa sheegtay in tilaabooyinka loo qaaday dhanka bogsashada qaran ee Koonfurta Suudaan aysan ku filneyn
Warbixin ay soo saartay Qaramada Midoobay oo bishaan la shaaciyay ayaa muujineysa in Koonfurta Suudaan aysan horumar la taaban karo ka sameynin bogsiinta dhaawacyada qarankan dhalinyarada ah labo sano ka dib markii uu dhamaaday dagaal sokeeye. taasi oo galaafatay nolosha 40,000 ayna barakicisay in kabadan laba milyan oo qof.
Wakaaladda wararka ee Associated Press ayaa ku warantay in halkii laga bogsan lahaa, uu waddanku ka jajaban yahay qaab qabiileed, iyadoo siyaasiyiintu ay isku hubeynayaan beello iska soo horjeeda. Tani lama filaan ku noqon mayso aqristayaasha Amjambo Africa, oo maqaallo hore ku soo daabacay kala qeybinta hoggaamiyeyaasha siyaasadeed ee ugu sarreeya South Sudan sida loo kala aqoonsaday.
Warbixinta Guddiga Xuquuqda Aadanaha ee Koonfurta Suudaan, oo la horgeeyay Golaha Xuquuqda Aadanaha ee Qaramada Midoobay, waxaa lagu magacaabay musuqmaasuq baahsan oo khatar ku ah bogsiinta qaranka, waxayna xustay in mas’uuliyiinta Koonfurta Suudaan ay muujinayaan rabitaan siyaasadeed oo yar oo lagu maxkamadeeyo dambiyada culus. taas badalkeedana waxay hubeynayaan maleeshiyo beeleedkooda.
Sida lagu sheegay warbixinta, rabshadaha galmada iyo cunno yarida ayaa sii hurinaya dagaalada kasii daraya ee wadanka ka socda, oo lagu qiimeeyo wadamada ugu saboolsan guud ahaan horumarka aadanaha. Marka lagu daro ku noolaanshaha iskahorimaadka weligiis ah, in ka badan kala bar dadka Koonfurta Suudaan ayaa gaajaysan, xaalad ka sii dartay daadadka oo ku qasbay in badan oo ka mid ah guryahooda tan iyo bishii Luulyo.
New Mainers oo ka socda Koonfurta Suudaan oo horay ula hadlay Amjambo Afrika ayaa rajo ka muujiyay soo kabashada degdegga ah ee umadda ka dib markii hoggaamiyeyaasha iska soo horjeeda ay jebiyeen heshiiskii nabadda ee bishii Febraayo 2020 ee loogu talagalay in lagu soo afjaro khilaafaadka hubeysan iyo in la dhiso dowlad midnimo. Si kastaba ha noqotee, lid ku ah rajadooda, si kastaba ha ahaatee, warbixinta Qaramada Midoobay waxay sheegaysaa in jilayaasha qaran ee qarsoon ay hub ku hubeynayaan maleeshiyada maxalliga ah si ay u weeraraan beelaha deriska ah. Oo waxaas oo dhami waxay dhacayaan in kasta oo cunaqabatayn xagga hubka ah lagu amray.
Dawladdu way diiday warbixinta UN-ka. Dhammaan warbixinnadan waxaa qoray dad si raaxo leh ugu fadhiya hudheelada Juba. Waxay qoraan warbixino noocan oo kale ah si loo dammaanad qaado sii wadida [jagooyinkooda], ”ayuu yiri afhayeenka xukuumadda Michael Makuei, oo sidoo kale caddeeyay in dalku dhab ahaantii fulinayo heshiiska nabadeed.
Dalka shidaalka qaniga ku ah wuxuu la dagaalamayaa dhibaato dhaqaale, oo ay kujirto qiimo dhac aad u daran oo ku yimid lacagtiisa. Wakaalada wararka ee Reuters ayaa ku warantay in bishii July ee sanadka 2020 bangiga dhexe ee dalka uu ka dhamaaday keydka sarifka lacagaha qalaad. Golaha Wasiiradu waxay kulmeen Jimcihii, 9-kii Oktoobar waxayna isku raaceen in lacag cusub la qaato oo la laalo lacagtii hore ee Koonfurta Suudaan si dhaqaalaha loo badbaadiyo. Koonfurta Suudaan waxay leedahay keydka seddexaad ee ugu.
Koonfurta Suudaan waxay ku guuleysatay madaxbanaanideeda Suudaan sanadkii 2011 laakiin waxay mar labaad dagaal ku soo laabatay labo sano ka dib, markii Madaxweyne Salva Kiir iyo ku xigeenkiisa Riek Machar ay bilaabeen khilaaf. Markii dambe, dhexdhexaadin, hoggaamiyeyaashu mar labaad ayay gacmaha is qabsadeen iyagoo dadaal ugu jira xasilinta dalka. Waxaa si weyn loo wada qirsan yahay in hadii la doonayo in dalka uu bogsado loo baahan yahay in labada hogaamiye ay wada shaqeeyaan, wixii ay u sheegaan qabiilooyinkooda.
PreviousDeynta Amaahda Canshuurta Deynta Ardayda
NextMadaxda Dowlad Goboleedyada ayaa ka wada hadlay nabada iyo xasiloonida Gobolka harooyinka waa weyn ee Afrika.